ITanzania ithe cha eBurundi ngokuthengisa ezokuvakasha ndawonye
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » ITanzania ithe cha eBurundi ngokuthengisa ezokuvakasha ndawonye
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba ZaseBurundi • Izindaba zikaHulumeni • Investments • Izindaba ZaseTanzania • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
ITanzania neBurundi zithathe isinqumo sokuzihambela zodwa ngokukhangisa ngezokuvakasha emazweni abo. Abanye bathi lesi ngesinye isipikili ebhokisini lokubambisana kwaseMpumalanga Afrika.
Izivumelwano zaphambilini ezisayinwe ekuqaleni kweminyaka eyishumi zazibone indlela yesifunda yokumaketha i-East Africa njengendawo eyodwa enezinto eziningi ezihehayo ezagcina zibone iTrademark East Africa isekela ukusungulwa kwe-East African Tourism Platform ukuhlinzeka ababambiqhaza bezindawo zomphakathi nabazimele indlela yokuhlala phansi, ukuthuthukisa kanye ne-ajenda kanye nohlelo lokusebenza bese uyalukhipha.
Ngokushesha ngemuva kwalokho kodwa kwacaca ukuthi ikakhulukazi iTanzania, ngokufihla nangokusobala, yashaya amabhuleki futhi, kwesinye isikhathi imingcele yokuvinjelwa okuqondile ngokusho kwempendulo enikezwe ababekhona emihlanganweni.
Ngenkathi ngo-2014 kwethulwa i-Visa evamile ye-East African Tourism kwaba yiTanzania futhi, edonsela iBurundi kwalasha kanye nabo, abavimba ukuqaliswa kwayo, bayishiya i-'Coalition of the Willing 'ngaphansi kwamaphrojekthi we-Northern Corridor Integration ukuze ivule iVisa enxantathu izivakashi nokwenza ikakhulukazi ukuhambela izakhamizi kanye nezifiki ezibhaliswe ngokusemthethweni kanye nezakhamizi kube lula.
Lokhu kuholele ekutheni ukusuka e-Uganda kuye eKenya naseRwanda kukhuphuke kakhulu futhi kubeke i-Uganda endaweni yesi-4 yomhlaba 'njengabahlinzeki' bezivakashi eKenya ngonyaka odlule.
I-East African Tourism Platform, manje engasasebenzi njengoba i-Trademark idonsa imali, ngenkathi igcwalisa inhloso ye-Uganda, Kenya neRwanda, nokho yehluleka ukuletha ngokugcwele laba abanye ababili ababegibele kanye nabaphathi bamaholo, mhlawumbe bekhathele ukuxabana okungapheli nokuntuleka kwenqubekela phambili enkulu noma nini lapho kwakudingeka ivoti ngazwi linye, ekugcineni wayehamba eshiya iphrojekthi, ashiye iMpumalanga Afrika ihlwempu ngenxa yayo.
Kuyazwakala emithonjeni evame ukwaziswa ukuthi i-Uganda, Kenya, neRwanda baphikisana nokushintshwa kwesivumelwano sango-2011 ngesikhathi somhlangano owawuse-Arusha ngesonto eledlule kodwa ekugcineni kungenza okuncane ukugcina la mazwe amabili angafuni ukuhlangana. Imboni yezokuvakasha eBurundi, ikakhulukazi, yiyona ehlaselwe kakhulu kule ntuthuko, njengoba ezokuvakasha, selokhu intuthuko yezepolitiki enesiyaluyalu eminyakeni edlule, yehle yacishe yangabi nalutho futhi izivakashi, ngokwengxenye ngenxa yokuntuleka kokuxhumana okwanele komoya futhi ngokwengxenye eziphakeme ngokuhlekisa Izithiyo zeVisa, zidlule kalula eBurundi futhi zathanda amanye amazwe.
Ngesimo sesithathu noma sesibili ekomidini loNgqongqoshe elaphikisana nokuguqulwa kwesivumelwano, iTanzania ikubeke kwacaca ukuthi abazizwa bebophezeleke kuso futhi bazozihambela ngendlela yabo, baqhubekele phambili nokubambisana eMpumalanga Afrika kanye nesipikili ebhokisini umqondo wokuqhakambisa iMpumalanga Afrika njengendawo eyodwa enezindawo eziningi ezikhangayo.
Le webhusayithi engezansi manje ihlanganisa i-Uganda, iRwanda, neKenya kuphela, amazwe amathathu asalandela umgomo wezindawo zombukiso ezihlanganyelwe emibukisweni emikhulu yezentengiselwano yezokuvakasha lapho abanikazi bezokuvakasha nabasebenzela ezokuvakasha bakuthola kulula ukwenza ibhizinisi nala mazwe amathathu ezindaweni eziseduze .